Fahasamihafana eo amin'ny Klebsiella pneumoniae sy Streptococcus pneumoniae | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny Klebsiella pneumoniae sy Streptococcus pneumoniae | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / biolojia / bakteriolojia / fahasamihafana eo amin'ny Klebsiella pneumoniae sy Streptococcus pneumoniae
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny Klebsiella pneumoniae sy Streptococcus pneumoniae dia ny Klebsiella pneumoniae dia bakteria miendrika tsorakazo miiba gram raha Streptococcus pneumoniae kosa dia bakteria miabo tsara, tsy misy motera ary tsy mitondra oval na boribory miendrika spherical .
Samy Klebsiella pneumoniae sy Streptococcus pneumoniae dia bakteria roa samy hafa izay miteraka pnemonia , ary karazana aretina hafa. Ireo karazana bakteria roa ireo dia anaerobes fakultika izay tsy mihetsika. Koa satria samy miteraka fanoherana fanoherana antibiotika ireo bakteria ireo, dia sarotra ny mitsabo ny aretiny.
2. Inona ny Klebsiella pneumoniae
3. Inona no atao hoe Streptococcus pneumoniae
4. Ny fitoviana eo amin'ny Klebsiella pneumoniae sy Streptococcus pneumoniae
5. Fampitahana mifanila - Klebsiella pneumoniae vs Streptococcus pneumoniae amin'ny endrika Tabular
Inona ny Klebsiella pneumoniae ?
Klebsiella pneumoniae dia bakteria miiba miiba gram, tsy mihetsika, izay voahidy sy mametaka lactose. Ankoatr'izay, K. pnemonia dia bakteria anaerobika mahay manavaka hita ao amin'ny flora am-bava, hoditra ary tsinay. Io bakteria io dia miteraka karazana aretina isan-karazany, ao anatin'izany ny pnemonia, ny aretin'ny lalan-dra, ny ratra na ny aretina amin'ny toerana fandidiana ary ny meningite. Ny toe-javatra mahazatra indrindra ateraky ny K. pnemonia dia pnemonia. Ny pnemonia naterak'i K. Sarotra ny mitsabo ny aretin'ny K. pneumoniae satria antibiotika vitsivitsy ihany no mahomby amin'ity bakteria ity.
Ny anton-javatra maloto indrindra an'ny K. pneumonia dia ny kapsily polysaccharide an'ny zavamananaina. Ankoatr'izay, ny lipopolysaccharides izay manafotra ny ivelany dia singa maloto iray hafa. Amin'ny ankapobeny, ny olona salama dia tsy tratran'ny aretina K. pnemonia . Ireo olona mararin'ny tsimatimanota malemy mora tratran'ny aretina.
Sary 01: pnemonia klebsiella
K. pnonia dia miaina amin'ny tany ihany koa. Izy io dia afaka manamboatra azota amin'ny toe-piainana anaerobika. Noho izany, ampiasaina amin'ny fambolena izy io, ary naneho vokatra lehibe amin'ny fitomboan'ny vokatra sy ny fitomboan'ny zavamaniry.
Inona ny Streptococcus pneumoniae ?
Streptococcus pneumoniae dia bakteria anaerobika miabo tsara sy salama. Mitranga izy ireo toy ny diplococci, izay faritana matetika ho toy ny lancet. Ankoatr'izay, S. pneumoniae dia catalase-negatif sy α-hemolytic. S. pneumoniae dia flora ara-dalàna an'ny lalan-pisefoana. Fa ny fanafihana dia miteraka pnemonia. Ny pnemonia dia miteraka meningite ary indraindray koa bakteria amin'ny okisma. Ny antony malemy amin'ny S. pneumoniae dia ny kapsily polysaccharide, izay miaro ny bakteria amin'ny phagositosis. S. pnemonia dia manana karazana antigenika mihoatra ny 85 miorina amin'ny antigine kapsily.
Sary 02: S. pneumoniae
Penicillin dia antibiotika mahazatra ampiasaina amin'ny aretina S. pneumonia e. Saingy, ny karazana sasany dia nanohitra ny penicillin. Noho izany, antibiotika marobe no omena ho an'ny aretina S. pneumoniae . Ankoatr'izay, misy vaksinim-panafody ho an'ny aretina S. pneumoniae .
Inona ireo fitoviana misy eo amin'ny Klebsiella pneumoniae sy Streptococcus pneumoniae ?
Samy bakteria tsy mihetsika izy roa.
Ary koa, anaerobika mahay manavaka izy ireo.
Ankoatr'izay, ny aretina mahazatra indrindra ateraky ny karazana bakteria roa dia ny pnemonia.
Miteraka areti-mifindra amin'ny olombelona izy ireo
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Klebsiella pneumoniae sy Streptococcus pneumoniae ?
Klebsiella pneumoniae dia bakteria miendrika gram-negatif. Mifanohitra amin'izany, ny Streptococcus pneumoniae dia bakteria miabo tsara, tsy mihetsika ary tsy bakteria miendrika oval na boribory miendrika spherical. Noho izany, io no fahasamihafana lehibe eo amin'ny Klebsiella pneumoniae sy Streptococcus pneumoniae . Ankoatr'izay, ny Klebsiella pnemonia dia miteraka pnemonia, aretin-dra, ratra na aretina amin'ny toerana fandidiana, ary meningite, raha Streptococcus pneumoniae kosa dia miteraka pnemonia, meningite, ary indraindray bakteria maizina.
Ankoatr'izay, Klebsiella pneumoniae dia flora ara-dalàna amin'ny vava, hoditra ary ny tsinay, raha toa kosa ny Streptococcus pneumoniae dia flora ara-dalàna an'ny lalan-pisefoana. Ny tena zava-dehibe dia manamboatra azota amin'ny tany i Klebsiella pneumoniae raha tsy afaka manamboatra azota kosa ny Streptococcus pneumoniae .
Ity ambany ity ny infographic dia mamintina ny tsy fitovizan'ny Klebsiella pneumoniae sy Streptococcus pneumoniae .
Famintinana - Klebsiella pneumoniae vs Streptococcus pneumoniae
Klebsiella pneumoniae dia bakteria miiba ratsy, tsy voafindra, tsy mihetsika. Ny antony mahazatra indrindra amin'ny pnemonia azon'ny hopitaly dia vokatry ny K. pnemonia . Mifanohitra amin'izany kosa, ny Streptococcus pneumoniae dia diplococcus miabo tsara izay bakteria anaerobika mahay manavaka. Noho izany, io no fahasamihafana lehibe eo amin'ny Klebsiella pneumoniae sy Streptococcus pneumoniae.
1. Patterson, Maria Jevitz. "Streptococcus." Microbiology momba ny fitsaboana. Fanontana faha-4. , Tranombokim-pirenena amerikana momba ny fitsaboana, 1 Janoary 1996, Azo jerena eto .
2. Ashurst, John V. “Klebsiella Pneumonia.” StatPearls [Internet]. , Tranombokim-pirenena amerikana momba ny fitsaboana, 22 nov. 2019, Azo zahana eto .
1. “Klebsiella pneumoniae 01” Nosoratan'i CDC - (Public Domain) via Commons Wikimedia
2. "Toetra mampiavaka, streptococcus pneumoniae, bakteria, zanatany" (CC0) via Pixino
Fahasamihafana eo amin'ny Slime Layer sy Capsule Fahasamihafana eo amin'ny Azotobacter sy Azospirillum Fahasamihafana eo amin'ny F Plasmid sy ny R Plasmid Fahasamihafana eo amin'ny Mycoplasma sy Chlamydia Fahasamihafana eo amin'ny bakteria sy antibiotika
Fahasamihafana eo amin'ny tavy Areolar sy Adipose
Fahasamihafana eo amin'ny voditongotra sy ny stilettos
Fahasamihafana eo amin'ny alikaola sy Phenol
Fahasamihafana eo amin'ny Midnight Club LA sy ny fanontana feno